काठमाडौंको ‘कोर’ कथा - कोसेली - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौंको ‘कोर सिटी’ कुन हो ? नगरको दक्षिणतिर भीमसेनथानस्थित विष्णुमती नदीदेखि भित्र र ताम्सीपाखामा विष्णुमतीवारि, उत्तरतिर भोटाहिटीदेखि भित्र, पूर्वतिर टेकुदेखि भित्र र पश्चिमतिर ठहिटीदेखि भित्रको एउटा गिजिमिजी क्षेत्र नै कोर सिटी हो ।
स्थानीय बौद्ध धर्मावलम्बीले काठमान्डुको कोर मानेका छन्– थथुपुइँ (माथि ठहिटीदेखि असनचोकसम्म), दथुपुइँ (असनदेखि मखन टोलसम्म), लाय्कूपुइँ (मखनदेखि काष्ठमण्डप भएको क्षेत्रसम्म) र क्वपुपुइँ (काष्ठमण्डपबाट तल यंगाल–लगन टोलसम्म) लाई ।
जेष्ठ १४, २०७९ सुरेश किरण
सम्बोधनबाटै बुझिन्छ, यो काठमाडौंको सबैभन्दा भित्री क्षेत्र हो । क्षेत्रफल नाप्ने हो भने यो अत्यन्तै सानो एक टुक्रा भूमि मात्रै हो । काठमाडौं महानगरपालिकामा हाल भित्री क्षेत्रमा पर्ने ११ वटा वडालाई ‘कोर सिटी’ भनेर बुझ्ने गरिन्छ (वडा नं. १२, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५ र २७) । आकारमा यी वडा यति साना छन् कि यी सबै जोड्दा पनि कुल क्षेत्रफल २.५२ वर्ग किलोमिटर मात्रै हुन आउँछ (स्थानीय जनप्रतिनिधि २०७४, मदरल्यान्ड पब्लिकेसन प्रालि) । यो कुल क्षेत्रफलै पनि अत्यन्त सानो हो, कति सानोभन्दा काठमाडौंको यही महानगरपालिकाभित्र ११ वडाको कुल क्षेत्रफलभन्दा ठूलो आकारका अर्को ६ वटा सिङ्गो वडा छन् ।
तर, आकारमा सानो भए पनि काठमाडौंको यही ‘कोर सिट’ ले सम्पूर्ण नेपालकै पहिचान र गरिमालाई शिरमा बोकेको छ । काठमाडौंभित्र जो यथार्थमा काठमाडौं हो, त्यो मूलतः यही ‘कोर सिटी’ हो । पृथ्वीनारायण शाहले आक्रमण गर्नुपहिले काठमाडौंलाई नै नेपाल भन्ने गरिन्थ्यो । वास्तवमा त्यतिबेला नेपाल नामले जति भूभागलाई सम्बोधन गरिन्थ्यो, त्यो भनेको यही ‘कोर सिटी’ मात्रै हो । यो भू–भागभित्र छिरेपछि मात्रै ‘नेपाल गएको’ मानिन्थ्यो ।
त्यसताकाको परिभाषाअनुसार, सहरको एक प्रमुख अंग ‘मण्डप’ पनि हुन्थ्यो । ‘मण्डप’ सभा भवनको विशिष्ट रूपमा पनि हुन सक्छ अथवा डबलीका रूपमा साधारण पनि । यहाँ जो मण्डप थियो, त्यसको नाउँ काष्ठमण्डप थियो, यही मण्डपको नाउँले सहर नै ‘काष्ठमण्डप’ कहलिन पुग्यो (धनवज्र वज्राचार्य, ‘गोपालराजवंशावलीको ऐतिहासिक विवेचना’ ।) जुन काष्ठमण्डपले ‘काठमाडौं’ भन्ने नामको जन्म गरायो, त्यो यही कोर सिटीभित्रै विद्यमान छ । अतः काष्ठमण्डपलाई कोर सिटीको पनि सबैभन्दा कोर स्मारक भन्न सकिन्छ ।
किराँतकालीन नेपालको राजधानी कहाँ थियो, त्यो पत्ता लागेको छैन । लिच्छविकालीन नेपालको राजधानीचाहिँ काठमाडौं नै थियो । हालको हाँडीगाउँमा तत्कालीन दरवार थियो । इतिहासकार देवीचन्द्र श्रेष्ठका अनुसार, लिच्छविहरूको शासन विशालनगर भेगतिर थियो । तर, राजा जयदेव (द्वितीय) पछि एक्कासि यो शासन केन्द्र हराउँछ र हाम्रो इतिहासको मल्लकाल पुग्दा ‘भक्तपुर’ मा पो नेपालको राजधानी हामी भेट्टाउँछौं । (देवीचन्द्र श्रेष्ठ, ‘रत्न मल्ल र उनको समकालिक नेपाल मण्डल’ ।)
तर, सुरुको मल्लकालमा राजधानी भक्तपुर भए पनि कान्तिपुरको शक्ति भने मजबुत थियो । यहाँको व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न स्थानीय व्यापारीलाई महापात्रको रूपमा नियुक्त गरिएको हुन्थ्यो । तर, व्यापार बढ्दै गर्दा ती महापात्रहरूले आफ्नो सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी पनि नियुक्त गर्न थाले । पछि राजनीतिमा पनि कब्जा जमाउन थाले । यसरी काठमाडौंले राजधानी भक्तपुरको त्रिपुर दरबारलाई समेत चुनौती दिन थाल्यो । उनीहरूलाई निगरानी गर्न तत्कालीन राजा यक्ष मल्लले आफ्ना छोरा राय मल्ललाई काठमाडौं खटाएका थिए । (देवीचन्द्र श्रेष्ठ, ‘रत्न मल्ल र उनको समकालिक नेपाल मण्डल’ ।)
यक्ष मल्लको मृत्युपछि उनका अर्का छोरा रत्न मल्लले नेसं ६०४ (विसं १५४१) मा काठमाडौं कब्जा गरी यहीँ शासन चलाउन थाले । शासन चलाएको मात्र होइन, तत्कालीन नेपालमण्डलको राजधानी पनि कान्तिपुरलाई नै बनाउने प्रयत्न गरे (देवीचन्द्र श्रेष्ठ, ‘रत्न मल्ल र उनको समकालिक नेपाल मण्डल’) । रत्न मल्लको शासन सुरु भएपछि काठमाडौं पुनः आफ्नो पुरानै शौर्यमा फर्कन थाल्यो । त्यसपछि भने यो नगरले आजसम्म पछाडि फर्केर हेर्नुपरेको छैन । बरु अघि बढिरहेको छ निरन्तर ।
त्यसताका नेपाल राज्य मुख्य रूपमा दुई भागमा विभक्त थियो– केन्द्रबाट सोझै शासन गरिने प्रदेश र सामन्तद्वारा शासन गरिने प्रदेश (धनवज्र वज्राचार्य, ‘गोपालराजवंशावलीको ऐतिहासिक विवेचना) । काठमाडौं आकारले हालको ‘कोर सिटी’ मात्रै भए पनि यसको प्रशासनिक फैलावट भने हाँडीगाउँ, देवपत्तन र एक पटक त बनेपासम्म पनि फैलिएको थियो ।
त्यतिबेलाको काठमाडौंको आकारबारे चर्चा गर्दै विसं १८५० मा नेपाल आएका कर्णेल कर्कप्याट्रिकले आफ्नो भ्रमण वृत्तान्त ‘एन अकाउन्ट अफ द किंगडम अफ नेपाल’ मा लेखेका छन्, ‘...काठमाडौं सहरको लम्बाइ एक माइल र चौडाइ कतै आधा माइल छ त कतै चौथाइ माइल जति मात्रै छ ।’ पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौं आक्रमण गर्दासम्म यो ठाउँमा करिब पाँच हजार घर र ५० हजारभन्दा कम जनसंख्या भएको अनुमान गरिएको छ (डा. साफल्य अमात्य, ‘काठमाडौं नगरायण) ।
भाषा वंशावलीमा भने कान्तिपुर नगरको स्थापना सन् ९८३ ताका लिच्छवि राजा गुणकामदेवले गरेको र त्यतिबेला यहाँ दैनिक १ लाखको व्यापार हुने एवं १८ हजार घर भएको उल्लेख छ । राजा गुणकामदेवले उतिबेला खड्ग आकारमा आठ कुनामा आठै मातृका स्थापना गरी यो नगर निर्माण गरेको भनिए पनि इतिहासकारहरू भने गुणकामदेवले पहिल्यै स्थापना भइसकेको नगरलाई व्यवस्थित शहरीकरण मात्रै गरेको हो भन्छन् ।
सानो आकार भए पनि यो ‘कोर सिटी’ लाई भौगोलिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोणले विभक्त गरी व्यवस्थापन गरिएको थियो । भौगोलिक हिसाबले यसलाई यम्बु (माथिल्लो भेग), यंग्ल (तल्लो भेग) र स्वकम्बु (बीचको भेग) गरी तीन खण्डमा विभाजित गरिएको थियो । संस्कृतमा माथिल्लो भेगलाई कोलिग्राम र तल्लो भेगलाई दक्षिण कोलिग्राम नाम दिइएको थियो । यो दुई क्षेत्र सांस्कृतिक रूपले फेरि चार खण्डमा विभाजित छ । स्थानीय बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले यसलाई थथुपुइँ (माथि ठहिटीदेखि असनचोकसम्म), दथुपुइँ (असनदेखि मखन टोलसम्म), लाय्कुपुइँ (मखनदेखि काष्ठमण्डप भएको क्षेत्रसम्म) र क्वपुपुइँ (काष्ठमण्डपबाट तल यंगाल–लगन टोलसम्म) नामले क्षेत्र विभाजन गरेको थियो (डा. साफल्य अमात्य, ‘काठमाडौं नगरायण) ।
व्यवस्थित सहर निर्माण गर्न यसलाई विभिन्न भेगमा विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ । राजा महेन्द्र मल्ल (सन् १५६०–१५७४) ले यो क्षेत्रलाई २४ वटा इलाकामा बाँडेका थिए । पछि यही २४ इलाका पनि विभक्त भएर ३२ वटा बन्यो । यो ३२ इलाका पछि ३२ वटा टोलमा रूपान्तरण भयो । भनिन्छ, यो ३२ वटै टोलमा प्रवेश गर्ने छुट्टाछुट्टै द्वारहरू पनि बनाइएका थिए ।
टोल मात्र होइन, त्यतिबेला काठमाडौंको यो नगर प्रवेश गर्न पनि सिमानाहरूमा विभिन्न द्वार बनाइएका थिए । यस्ता द्वारहरू भोटाहिटी, सुन्धारा, भीमसेनस्थान, ताम्सीपाखा, मरु टोल आदि स्थानमा थिए । यी द्वारहरू खासगरी काठमाडौं नगरको सुरक्षा गर्न बनाइएको थियो । केही इतिहासकारले काठमाडौंलाई घेर्ने गरी अग्ला पर्खाल पनि बनाइएको उल्लेख गरेका छन् । तर, पुरातात्त्विक अन्वेषणहरूले त्यस्तो पर्खालको कुनै अवशेष भने भेट्टाएको छैन । तथापि नगर प्रवेश गर्ने ठूला द्वारको अवशेष कतै भने भेटिएका छन् । द्वारकै कारण काठमाडौंका कतिपय टोलको नामकरणसमेत भएको छ, जस्तो ध्वाखाबहाः, मरुढोका, हनुमानढोका आदि । पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौं आक्रमण गर्दा यहीँभित्रकै कुनै मानिसले त्यो द्वार खोलिदिएको र त्यहीँबाट गोर्खाली सेना नगर प्रवेश गरेको बताइन्छ । यस्ता द्वारभित्रको क्षेत्रलाई ‘देशभित्र’ र द्वारबाहिरको क्षेत्रलाई ‘देशबाहिर’ भन्ने चलन राणाकालसम्म पनि चलेको थियो । त्यतिबेला ‘देशबाहिर’ पनि पातलो वस्ती त थियो, तर तिनीहरू ‘देशभित्र’ अछुत मानिन्थे ।
हरेक वर्ष इन्द्रजात्राको पहिलो दिन काठमाडौंवासीहरू आफ्ना दिवंगत आफन्तका नाममा नगर परिक्रमा गर्छन् । यो परम्परालाई ‘उपाकू वनेगु’ भनिन्छ । नगर परिक्रमा गर्दा काठमाडौंको यही पुरानो सिमानालाई नै प्रदक्षिणा गरिने विश्वास गरिन्छ, जसलाई फटाफट पार गर्ने हो भने दुई घण्टा पनि लाग्दैन ।
अहिले नेपालको संस्कृति भनी प्रचार गरिएका सबैजसो काठमाडौंली–संस्कृति आयोजना गरिने मूल थलो पनि यही ‘कोर सिटी’ नै हो । इन्द्रजात्रा, पाहाँचःर्‍हे, सेतो मछिन्द्रनाथको जात्रा, गाईजात्रा, सम्यक, पञ्चदान आदि पर्व यही क्षेत्रमा आयोजना गरिन्छ । राजनीतिक रूपले पनि यो क्षेत्र सुरुदेखि नै सचेत छ । २००७ सालको क्रान्ति हुँदा आयोजना गरिने सबैजसो सभा सम्मेलनहरू यही क्षेत्रका इटुम्बहाल, यट्खा बहाल, असन चोक, इन्द्रचोक आदि ठाउँमा सम्पन्न हुन्थे । १९९७ सालमा फाँसी दिइएका चार सहिदमध्ये तीन जना यही क्षेत्रका वासिन्दा थिए ।
अहिले काठमाडौं विस्तार भइसकेको छ । हालको काठमाडौं महानगरपालिका नै पनि यो ‘कोर सिटी’ को सम्पूर्ण क्षेत्रभन्दा करिब ५० गुणा ठूलो छ । तर, काठमाडौंको कुनै पनि सामाजिक, सांस्कृतिक अवधारणा भने यही क्षेत्रको मनोविज्ञानले निर्माण गर्छ । तीन वर्षअघि उर्लिएको गुठी विधेयकविरुद्धको आन्दोलनमा सम्पूर्ण उपत्यकावासी सहभागी भएको भए पनि त्यो आन्दोलनको पृष्ठभूमि यही ‘कोर सिटी’ को मनोविज्ञानले तयार पारेको थियो । कोर सिटीभित्रका स्थानीयवासी अहिले विभिन्न कारणले पुरानो ठाउँ छोड्दै अन्यत्र बसोबास गरिरहेका छन् । तर, भौतिक बसाइँ–सराइ अन्यत्र गरिहाले पनि उनीहरूले मनोवैज्ञानिक आवास भने कोर सिटीभन्दा बाहिर लैजान सकेका छैनन् । त्यसैले त गुठी आन्दोलन हुँदा सबै जना पुनः ‘कोर सिटी’ के गुरुत्वाकर्षणले तानिए ।
कोर सिटी मूलतः सांस्कृतिक नेपालको केन्द्र नै हो । यसलाई ‘स्थानीय’ बनाउने पहिलो कार्य भने विसं १९७६ को पौष २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री ३ चन्द्रशमशेरले गरेका थिए । सो दिन यहाँको फोहोर सफाइ गर्न उनले एउटा ‘सफाइ अड्डा’ स्थापनाको घोषणा गरेका थिए । त्यो अड्डा हालको धर्मपथमा राखिएको थियो । २००३ फागुन २ गते श्री ३ पद्मशमशेरले त्यसलाई ‘म्युनिसपालिटी’ बनाए । विभिन्न २१ इलाकाबाट २१ जना प्रतिनिधि निर्वाचित पनि भए । तर, त्यसले कुनै काम गर्न सकेको थिएन । २०१० मा अर्को चुनाव भयो । त्यतिबेला २१ इलाकालाई घटाएर १८ वटा वडा बनाइयो । साथै ‘म्युनिसपालिटी’ भन्ने नाम हटाएर ‘काठमाडौं नगरपालिका’ राखियो । त्यही काठमाडौं नगरपालिका विसं २०५२ मंसिर २९ गते ‘काठमाडौं महानगरपालिका’ घोषित भयो (भुवनलाल प्रधान, ‘काठमाडौं उपत्यकाका सांस्कृतिक छिर्कामिर्का’) ।
अहिले ‘कोर सिटी’ मा मात्र काठमाडौं छैन । तर, कोर सिटीबिनाको काठमाडौं भने काठमाडौं हुने छैन । कोर सिटी आकारले सानो भए पनि यसको सांस्कृतिक गुरुत्व अति सघन छ । यदि यो सानो भूमिको टुक्रोलाई काठमाडौंबाट झिक्ने हो भने त्यहाँ ‘काठमाडौं’ रहने छैन । यो साढे दुई वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल भएको भूमिको टुक्रो नै एउटा यस्तो भूमि हो, जहाँ गएको ४ हजार वर्षअघि नै सहर बसिसकेको थियो । नयाँ बनेका सहरहरूले आकारमा, भव्यतामा, भौतिक सुविधामा जित्न सक्लान्, तर इतिहासमा जित्न सक्दैनन् । काठमाडौंको कोर सिटी इतिहासको त्यही जित्न नसकिने भूमिको एक टुक्रो हो ।